DOWNLOAD MUSE WHEEL CONTROL ỌHỤRỤ MBIPUTE. - MMEMME NYOCHA - 2019
Webcam - ngwa ngwa nke bara uru maka nkwurịta okwu. Laptọọpụ niile nwere ngwa kamera nke dị iche iche. Site n'enyemaka ha, ịnwere ike ịkpọ oku vidio, gbasaa vidio gaa netwọk ma were onwe gị. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi ewe foto nke onwe gị ma ọ bụ gburugburu ebe obibi na laptọọpụ arụmọrụ.
Anyị na-eme foto na kamera weebụ
Mee onwe gị na laptọọpụ "kameraị" ahụ nwere ike ịdị iche.
Usoro mmemme site n'aka onye na-emepụta, nyere ya na ngwaọrụ ahụ.
Ngwakọta nke atọ nke na-enye ohere na ụfọdụ iji gbasaa ike nke igwefoto ma gbakwunye mmetụta dịgasị iche iche.
Ọrụ ntanetị dabere na ọkpụkpọ Flash.
Ezigbo nchịkọta dị na Windows.
Enwere otu ihe ọzọ ọ bụghị doro anya, mana n'otu oge ahụ a pụrụ ịdabere na ya, nke anyị ga-ekwurịta okwu na njedebe.
Usoro 1: Nke atọ nke Software
Mmemme ndị nwere ike dochie software ọkọlọtọ, mepụtara ọtụtụ. Ọzọ, anyị na-atụle ndị nnọchianya abụọ nke nke a.
ỌtụtụCam bụ mmemme nke nwere ike ịgbasawanye ike nke kamera weebụ gị site n'ịgbakwunye mmetụta, ederede, foto na ihe ndị ọzọ na ihuenyo. N'okwu a, onye na-ahụ maka onye ọrụ ma ọ bụ onye na-ekiri ya ga-enwe ike ịhụ ha. Tụkwasị na nke ahụ, software ahụ na-enye gị ohere ịkwasa ihe oyiyi na ụda, gbakwunye ọtụtụ ese foto na wọkspeesi, na ọbụna vidiyo YouTube. Anyị, n'ihe dị n'isiokwu a, nwere mmasị naanị otu esi "were foto" nyere ya aka, nke dị mfe.
Mgbe ịmalitere usoro ihe omume a, pịa bọtịnụ na akara ngosi igwefoto na foto ahụ ga-echekwa na nchekwa na nchekwa ahụ akọwapụtara na ntọala.
Iji gbanwee nchekwa nchekwa foto, gaa na ntọala ma gaa na mpaghara ahụ "Snapshots". Lee site na ịpị bọtịnụ ahụ "Nyocha", ị nwere ike ịhọrọ nchekwa ọ bụla.
Ihe omume a yiri ọrụ na nke gara aga. Ọ maara otú e si emetụta mmetụta, mee vidio site na isi mmalite dị iche iche, na-enye gị ohere ịbido na ihuenyo ma nwee ọrụ foto.
Pịa bọtịnụ ahụ na akara ngosi igwefoto ahụ, mgbe foto ahụ batara na gallery ahụ.
Iji chekwaa ya na kọmputa gị, pịa na thumbnail nke RMB ma họrọ ihe "Mbupụ".
Na-esote, dee ebe faịlụ ahụ na pịa "Chekwa".
Gụkwuo: Otu esi eji WebcamMax
Usoro 2: Ụkpụrụ Omume
Ọtụtụ ndị na-arụpụta laptọọpụ, tinyere ngwaọrụ ahụ, na-enye ngwanrọ kamera kamera dị mma. Tụlee otu ihe atụ site na HP. Ị nwere ike ịchọta ya na listi "Mmemme niile" ma ọ bụ na desktọọpụ (ụzọ mkpirisi).
A na-eji esemokwu kwekọrọ na foto ahụ na foto ahụ ma chekwaa na nchekwa "Foto" Ochichi akwukwo Windows.
Usoro 3: Ọrụ Ịntanetị
Anyị agaghị atụle ebe a ọ bụla akụ, nke a dị ole na ole na netwọk. O zuru ezu ịdebanye na ajụjụ ọchụchọ dị ka "foto na kamera weebụ" wee gaa njikọ ọ bụla (ị nwere ike ịga na mbụ, anyị ga-eme ya).
Ọzọ, ọ ga-adị gị mkpa ịrụ ọtụtụ ihe, na nke a, pịa bọtịnụ ahụ "Ka anyị gaa!".
Mgbe ahụ nyefee ohere ịnweta kamera weebụ gị.
Mgbe ahụ, ihe niile dị mfe: pịa akara ngosi ahụ maara anyị nke ọma.
Chekwaa snapshot na kọmputa ma ọ bụ akaụntụ netwọk mmekọrịta.
Gụkwuo: Wepụta foto nke kamera weebụ gị n'ịntanetị
Usoro 4: Agba
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe maka usoro ọnụọgụgụ. Ịchọta esemokwu dị mfe: ọ dị na menu. "Malite" - "Mmemme niile" - "Standard". I nwekwara ike iru ya site na imeghe menu Gbaa ọsọ (Nweta + R) ma tinye iwu ahụ
Ọzọ ịkwesịrị ịpị bọtịnụ ahụ gosipụtara na nseta ihuenyo ma họrọ ihe ahụ "Site na nyocha ma ọ bụ igwefoto".
Usoro ihe omume ahụ ga-ewepụta ihe oyiyi site na igwefoto ahọrọ ma tinye ya na waaaji. Mmetụta nke usoro a bụ na Nkume enweghi ike ịgbanwu kamera kamera na ya n'onwe ya, dịka e gosipụtara ihe menu na-adịghị arụ ọrụ kwuru n'elu.
Usoro 5: Skype
E nwere ụzọ abụọ ịmepụta foto na Skype. Otu n'ime ha gụnyere itinye usoro ihe omume ahụ n'ọrụ, onye nke ọzọ - nchịkọta foto.
Gaa na ntọala ihe omume ahụ.
Anyị na-aga na mpaghara "Ntọala Ntọala".
Lee, anyị pịa bọtịnụ ahụ "Gbanwee avatar".
Na windo nke mepee, pịa "Were foto"mgbe ahụ, a ga-anụ ụda pụrụ iche na onyinyo ahụ ga-ifriizi.
Ihe mmiri ahụ nwere ike imezi foto ahụ, yana ịkwaga ya na kọlọtọ na waaaji.
Ka ịchekwaa pịa "Jiri onyinyo a".
Foto a ga-echekwa na nchekwa.
C: Ọrụ Aha njirimara AppData Na-agagharị Skype Gị _ Skype Foto
Mwepu nke usoro a, na mgbakwunye na obere oyiyi, bụ na mgbe niile omume, gị avatar ga-agbanwe.
Ịga na ntọala vidiyo, anyị anaghị eme ihe, ma e wezụga maka ịpị bọtịnụ. Ihuenyo bido. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụrụ na usoro ahụ maka ịmepụta ntanetịpụ adịghị etinye aka na ya, a ga-emepe ya na onye nchịkọta foto ọ bụla, otu ihe ahụ. Mgbe ahụ, ihe niile dị mfe - anyị na-ebipụ ihe ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye ihe, wepu ya, ma chekwaa foto ahụ gwụchara.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro a dịtụ mfe, ma ọ na-eduga kpọmkwem otu nha. Mwepu bụ mkpa ịhazi ihe oyiyi ahụ na nchịkọta akụkọ.
Hụkwa: Ịtọlite ​​igwefoto na Skype
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịchọta foto, ị kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na kamera gị dị ike. Nke a chọrọ ụzọ ole na ole dị mfe.
Gụkwuo: Ịgbanye igwefoto na Windows 8, Windows 10
Ọ bụrụ na agbanyere igwefoto ahụ, ma anaghị arụ ọrụ na-emekarị, a ga-achọ ihe ndị dị mkpa karị. Nke a bụ ule nke ntọala usoro na nyocha nke nsogbu dị iche iche.
Gụkwuo: Gịnị mere kamera anaghị arụ ọrụ na laptọọpụ
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ikwu na usoro niile akọwapụtara n'isiokwu a nwere ikike ịdị adị, ma ha na-eduga n'ọdịiche dị iche iche. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta foto na elu mkpebi, mgbe ahụ, ị ​​ga-eji mmemme ma ọ bụ ọrụ ntanetị. Ọ bụrụ na ịchọrọ avatar maka saịtị ma ọ bụ forum, mgbe ahụ skype ga-ezu.